January 2020 – TPEC
Halka ka Daawo Guddiga Doorashooyinka Puntland oo la kulmay Bulshada Degmada Buurtinle.
TPEC Puntland Garowe Office
Guddiga Doorashooyinka Puntland oo la kulmay Bulshada Degmada Buurtinle.
Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland ayaa maanta oo khamiis ah 30ka Janaayo 2020 wuxuu ka bilaabay degmada Buurtinle safar shaqo uu ku marayo gobolada Puntland si dadweynaha loo gaarsiiyo qorshaha hirgalinta hannaanka xisbiyada badan ee Puntland, iyo latashiyo ku aaddan arrimahaas. Ugu horrayn waxaa Guddigu xarunta degmada kula shiray maamulka,golaha degaanka iyo qaybaha bulshada …
Guddiga Doorashooyinka Puntland oo la kulmay Bulshada Degmada Buurtinle. Read More »
Daawo Guddiga Doorashooyinka oo la kulmayGolaha Wasiirada Puntland.
Daawo Guddiga Doorashooyinka Puntland oo la kulmay Bulshada Rayidka ah.
Guddiga Doorashooyinka oo la kulmayGolaha Wasiirada Puntland.
Guddiga KMG ee doorashooyinka Puntland ayaa xaruntiisa dhexe wuxuu kula shiray xubno ka tirsan Golaha Wasiirada Puntland oo matalaya wasaaradaha ay shaqada dhow kawada dhaxayso TPEC. Kulanka oo noqonaya mid balle ah waxaa maanta looga wada hadlay diyaarinta xeerka codbixiyaha, dhamaystirka astaynta xuduudaha degmooyinka iyo dardargelinta wacyigelinta dadwaynaha. TPEC Puntland Garowe Office
Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland TPEC ayaa maanta xarunta dhexe ee magaalada Garowe kulan kula qaatay xubno ka socday bulshada rayidka ah, xarumaha aqoonta; sida laamaha cilmibaarista, jaamacadaha, ururada haweenka, dhallinyarada iyo warbaahihta. Kulanka oo ahaa isxog-wareysi iyo in Guddiga iyo Bulshada Rayidka ah bishiiba mar ay shir noocaan oo kale ah. Waxaa shirka …
Guddiga Doorashooyinka Puntland oo la kulmay Bulshada Rayidka ah Read More »
Guddiga KMG doorashooyinka Puntland ayaa manta kulan kula qaatay xarunta dhexe ee Guddiga madaxa UNSOM xafiiskeeda Puntland Mr. Guy Griffin.
Guddiga KMG doorashooyinka Puntland ayaa manta kulan kula qaatay xarunta dhexe ee Guddiga madaxa UNSOM xafiiskeeda Puntland Mr. Guy Griffin. Kulanka waxaa looga wada hadlay sidii looga wada shaqayn lahaa Horumarinta Dimoqraadiyada Puntland iyo kaalinta Qaramada Midoobay ay ka qaadan lahayd. #TPECmedia
Guddiga KMG doorashooyinka Puntland ayaa kulan kula qaatay xarunta dhexe ee Guddiga madax ka socda Xafiiska Difaacaha Xuquuqda Aadanaha ee Puntland.
Guddiga KMG doorashooyinka Puntland ayaa manta kulan kula qaatay xarunta dhexe ee Guddiga madax ka socda Xafiiska Difaacaha Xuquuqda Aadanaha ee Puntland. Kulanku wuxuu ku saabsanaa sidii ay uga wada shaqayn lahaayeen dhowrista xuquuqda aadanaha gaar ahaan sidii ay dadka reer Puntland loo gaarsiin lahaa wacyigelin ballaaran oo ku saabsan hannaanka xisbiyada badan iyo sidii …
Guddiga KMG doorashooyinka Puntland ayaa kulan kula qaatay xarunta dhexe ee Guddiga madax ka socda Xafiiska Difaacaha Xuquuqda Aadanaha ee Puntland. Read More »
Waxa saaka Xubnaha Guddiga doorashooyinka Puntland iyo Shaqaalaha TPEC u bilaamay tababar ku saabsan arrimaha doorashooyinka.